Ọrụ na Dubai 2019 Strategies na Research maka Ọrụ na UAE 🥇
Ọrụ na Dubai Ịchọ ọrụ
Ọrụ na Dubai Ịchọ maka ọrụ n'ozuzu na-ekwu okwu arụ ọrụ ná mba ọzọ na UAE. Oge maka ọrụ nyocha na Dubai na Middle East agbanweela. Maka ọtụtụ akụkụ yana afọ ole ịchọta ọrụ ọhụụ ozugbo na mahadum. Ma nọgide na dịka ọmụmaatụ na kuziri oru na Dubai ma ọ bụ ọrụ ya na Dubai ruo mgbe a lara ezumike nká. Iji choputa ohere ohuru na Dubai n'olileanya na n'ụwa nke ugbu a ị ga - enweta ọrụ ọhụụ.
Dika ihe atụ nke ọha ọha bụ ndị na-achọ ọrụ na Dubai ụlọ ọrụ anyị na-agba mbọ inyere ha aka inweta ọrụ. Ọtụtụ Ọrụ Dubai ndị na-achọ ihe, maka nke a, kwesiri inwe ezigbo ahụmịhe ọrụ na imeghari ngwa ngwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha kwesịrị inwe ike ịchọta ọrụ ọhụrụ na nke ọhụrụ Dubai 2019 ebe ha nwere ike inweta ohere oru ohuru.
Ya mere n'ihi nke a ka ụlọ ọrụ anyị na-eme enyere aka inweta ọrụ ọ bụla na Dubai. N’aka ozo, inwere ike ile anya nyocha na usoro anyi ọrụ na Gulf mba. Companylọ ọrụ Dubai City na-elekọta ihe niile echebara echiche maka ọrụ gị. Nyere isi ihe ndia niile na acho oru na Dubai.
Mana n’ikpeazụ, onye ọ bụla na-achọ ọrụ kwesịrị inwe ezigbo ọganiihu na mmepe mmepe na atụmatụ dị n’iru. Maa, na edemede anyị, ị ga-eme ka ọganihu na UAE, Ma n'ezie, ịmara nke kachasị mma ma ị ga-enweta ohere ọrụ na Dubai. Ọganihu ọganihu na nyocha miri emi, na nyocha ikpeazụ, bụ nhọrọ kasị mma maka ọrụ na ahịa na UAE.
Ụbọchị ọhụrụ ịchọta ọrụ na Dubai
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu chọta ọrụ na Dubai adịghị mfe na 2019. Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta ma ọtụtụ n'ime ụzọ ndị ọzọ a na-emekarị na usoro maka ụlọ ọrụ na Dubai adawo mba. Nyere isi ihe ndia, gaa n'ihu ma lelee nke a ma ama Ebe nrụọrụ ọrụ Dubai. N'ọdịiche nke ụzọ ochie, arụ ọrụ ugbu a na UAE malitere ikpochapu ewu ewu. E nweghị ụzọ ọzọ ị ga-esi chọta ya ọrụ dị Dubai maka mba ọ bụla ndị na-elekarị anya nhọrọ nhọrọ na akwụkwọ akụkọ. Ma ọ bụ ọbụna chọọ maka ụbọchị maka ịchọta ọrụ nrọ ha. Ruo ugbu a ọrụ na Dubai na 98% bụ ugbu a n'ịntanetị. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime anyị International ndị na-achọ ọrụ aghọwanye ndị ọhụrụ ma mee atụmatụ ọhụrụ iji mee ka ọrụ na ọrụ ha dịkwuo mma.
Maka nzube nke na-enyere gị aka nweta ọrụ na UAE. Ụlọ ọrụ anyị na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ kachasị mma. Nke a bụ otú ndị ọrụ nchụso ndị ọzọ na-achọ ọrụ na UAE. Newzọ ọhụụ iji nweta ọrụ na Dubai abịalarịrị na Emirates. Ma nke a bụ ekwentị mkpanaka nyocha ọrụ na Dubai. Ị nwere ike ịchọ ugbu a ọrụ gị na nrọ gị.
Kedu otu esi achọta ọrụ ọrụ na Dubai na ogologo oge ọ ga - ewe?
Site n'ebumnuche a, ụlọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta ọrụ ohere na Dubai. Dika ihe atụ nke ima ima Dubai karịrị 300,000 rue 500,000 ndị ọrụ wepụrụ na-abịa na United Arab Emirates. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha niile chọrọ chọta ọrụ ọhụrụ na Dubai. Ma nke ahụ bụ ikwu: ọ bụghị onye ọ bụla ọ bụla ga-achọta ya ọrụ Dubai. Ihe mbụ ị ga-echeta achọ ụlọ ọrụ n'ịntanetị na Dubai 2019 ọ ga ewe oge. Maka nke a, ịkwesịrị iziga CV gị na ndị isi ihe na deba aha gị na ọtụtụ saịtị ọrụ na UAE. Citylọ ọrụ Dubai City kemgbe 2009 na-emezu nyocha na ndị njikwa HR. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ihe akaebe kasịnụ anyị natara bụ na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka itinye na Dubai.
N'okwu ahụ, ịkwesịrị imefu ihe karịrị 3 ọnwa naanị iji zipu CV na itinye onwe gị pụọ na na- na anya nke ndị ọrụ ga - ewe oge ma rue ọnwa 8. N'akụkụ dị mma, ị nwere ike mgbe niile jidere ụlọ ọrụ dị na Dubai ma ọ bụ ọbụna ere ahịa na Dubai n'oge ị na-achọ a ọrụ nrọ na UAE.
Nnyocha maka Ọrụ na Dubai
Dị ka ihe dị n'eziokwu, a chọrọ ka akara nchịkwa Bachelors ma ọ bụ Masters maka ọtụtụ ọrụ na UAE. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ kwesịrị inwe ọhụụ opekata mpe nke 2-5 na ọrụ ndị ahịa, ma ọ bụ 2-3 afọ ndị ahịa na-eje ozi. Na afọ 1-3 nke ahụmịhe na Middle East-n'akụkụ. Ọ dịkwa mkpa na asambodo gị dị mkpa ị kwesịrị ịdị na onye nwere ọhụụ. Isi ozo di na ọrụ bụ maka nlekọta na ogbugbu. N’aka nke ozo, ikwesiri ileba anya n ’ulo oru ndi egoro ahia. Ọrụ Careerjet nyocha ọrụ na Dubai na Ekeputara elu maka ugwo ahia nke Gulf. Ha bara ezigbo uru itinye ya na CV gị. N'ụzọ niile, mgbe anyị nyochara njirimara onye na-achọ ọrụ omenala, anyị na-achọ nyocha ọ bụla site na mmalite site na akụkọ. Na ịkọwa ihe ịkwesịrị ibuli profaịlụ gị iji bulite CV ma chọta ọrụ na Middle East.
Ihe mbụ iji cheta ọrụ ndị dị mkpa
Were ọrụ ị chọrọ iji nweta ọrụ:
Na mkpokọta, ikike jikwaa oru site na Ụlọ ọrụ dị na Dubai.
N'ezie, ị ga-enwerịrị ike ịrụ ọrụ naanị n'ime UAE.
Iji maa atụ, ikwesiri ike inye gị nkwa maka ọrụ gị na itinye aka na oke iji wee rụchaa ọrụ ahụ. Na-ekwusi okwu ike maka ịnweta ọrụ maka ọrụ ọbụlagodi na o siri ike. Nkwuputa ekwenti ekwenti nkà na Bekee na Arabic.
Na nkọwapụta, ị ga-emerịrị ihe ma na-ebute ụzọ oge niile.
Kpamkpam, rụpụta ọrụ dị mkpa na azụmahịa dị ugbu a. Nwee nghọta iji dozie nsogbu ngwa ngwa n'ikpeazụ ihe banyere obibi na Emirates.
Ebube / Nchọpụta maka ọrụ isi na UAE:
Ikwu okwu n'ozuzu ezigbo ezigbo ihe ọmụma banyere ụzọ dị iche iche na Dubai si azụ ahịa.
Dị ka a hụla ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ ahụmahụ na ịntanetị ahịa na ọnụnọ n'ịntanetị.
Ọgụgụ edemede dị ike n'asụsụ Bekee bụ ihe dị mkpa ma wuo akụkọ siri ike na ndị ahịa bụ ihe dị mkpa.
Ọrụ ndị dị na Emirates chọrọ Ahụmahụ na gburugburu ebe obibi n'ọtụtụ ọdịbendị, ịmalite, Europe, USA, Canada, Eshia.
Ka ọ dịgodị Ikwesiri inwe izu nka nke oma na ahụmịhe ahịa siri ike.
Ruo ugbu a, ọ bụla kwabata UAE ga-abụ nhazi zuru ezu, ọkpụkpọ egwuregwu, ma gosipụta nkà mmụta dị elu.
E mesịa Inwe mmezu ike banyere akụkụ arụmọrụ na nka niile dị na ahụmịhe ụlọ.
Nghọta maka azụmahịa ọzọ na UAE na ụfọdụ nlekọta nlekọta na-elekọta ndị na-eto eto na ụlọ ọrụ Middle East.
Akara nyocha na nkọwa ụlọ ọrụ na Dubai tupu nyochaa
Ego ole ka onye ọrụ na-eme mgbe ọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na UAE? A ghaghị icheta na ihe karịrị ụlọ ọrụ 170 dị na UAE anya na glassdoor.com. Ihe ọzọ dị mkpa n'ime nyocha gị kwesịrị ịbụ Ụgwọ ọrụ Dubai. N'okwu dị mma, ịnwere ike ịlele nke a tupu gị agaa maka nyochaa. Dịka ọmụmaatụ, họrọ maka aha ọrụ ma chọpụta ihe ego gị dịka onye ọrụ maọbụ onye nnọchianya nchịkwa nwere ike ịnweta maka nke ahụ ebe a kapịrị ọnụ na Dubai.
Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ Glassdoor na Dubai rụzuru ọnụ ọgụgụ ụgwọ ọnwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, nyocha ha dabere na 980 Ụlọ ọrụ obodo Dubai. Maka oge kachasị, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara akụkọ banyere ụgwọ ọnwa na UAE. Dịka egosiri n’elu, na nchịkọta, mkpesa ego nke ụlọ ọrụ ọ bụla kwụrụ. Na na nyocha nke ikpeazị ụgwọ ọrụ gbakwunyekwara. Ọbụna ha na-ekerịta akụkọ mkpesa na-akwụ ụgwọ maka onye ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai. N'ọnọdụ nke ọ bụla, enwere ike itinye ndị nyocha nyocha na-enweghị aha ma ọ bụ ndị ọrụ. Ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ahụ akọwapụtara na Dubai. Yabụ mgbe a na-ezigara na Dubai ga-ajụ gị mgbe ị gbara ajụjụ ọnụ ole ka ị na-achọ inweta ?. Ozugbo gị na nnyocha gị na Glassdoor, ị ga-ama ọnụọgụgụ nke ị nwere ike ịkọ ma nye ha n'ebughị ụzọ rịọ ụgwọ ọrụ.
Glassdoor - lee ego ole ị ga-atụ anya na Dubai
Ya mere ugbu a ọrụ ndị isi mba na Dubai 2019 nọ ebe ahụ na-eche gị. Mana dịka ọmụmaatụ, ọrụ ụgbọ ala na Dubai ma ọ bụ ọbụna ọrụ ndị dọkịta ezé na Dubai na-eche gị. Ọnweghị ihe kedu ọkwa ị na-etinye ị ghaghị ịbụ 100% kwadebere na oge maka ihu ihu. Na mberede ị ghaghị ile anya nke ọma Ọrụ Dubai. Ọhụụ nke ụlọ ọrụ nyocha, ihe mgbaru ọsọ na nchịkọta ọnụ ohere ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na-enye. N’aka nke ozo, nyocha ebumnuche ndi ama ama bu ihe ndi IT n’abia oru na Dubai. N'ihi na ohere ọrụ ndị ọrụ 7 Emirates bụ mgbe niile Ọnụ ụzọ ámá ndị Dubai na-emeghe maka ndị ọgbọ ọhụrụ si India.
Na nyocha ikpeazụ maka ohere ọrụ na Dubai, ị kwesịrị jidere ndị ọrụ. Kwadebe profaịlụ gị maka nlebara anya nyochaa ogologo oge gulf saịtị enwe ụlọ ọrụ ugbu a na Dubai. Ka o sina dị, na nke ọ bụla, ịlele abụọ Ụgwọ ọrụ Dubai na onye ozo ndị na-achọ ọrụ nyocha. Yabụ, mee mkpebi ụlọ ọrụ dị n'ọnọdụ ndị ahụ ị na-achọ ịbịaru nso. Na nyocha ikpeazụ, kụrụ ha iji gosipụta azụmaahịa azụmaahịa dị ka agbanyeghị ọgụgụ isi. Kpamkpam ma nweekwa ihe omuma banyere ya na ndi okacha mara banyere ulo oru ha. Yana nnukwu ntụkwasị obi ebe ha kwesiri itinye gi n’uzo n’iru.
Strategies maka Ọrụ na Dubai
Ijikọ ntanetị iji chọta ọrụ na Dubai 2019 na United Arab Emirates
Ihe mbụ ị ga-echeta bụ na ihe karịrị ọkara nke ọnọdụ ọrụ na-ekwuputala na weebụsaịtị ịchekwa ọrụ Dubai. N'otu oge, a na-enyekarị nke a dịka ọmụmaatụ nke ahịa zoro ezo. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu iji nweta ndị a a na-enye ọrụ karịrị peeji ndị dị elu Linkedin na UAE. N'otu aka ahụ ndị na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị nwere ụkwụ na ọnụ ụzọ. Ọrụ netwọk anyị dị iche na saịtị ndị ọzọ na Dubai.
Ọzọkwa, dịka eziokwu, ụlọ ọrụ Dubai City mepụtara sistemụ ebe ị nwere ike ịga ogologo ụzọ ma jikọta ya na ndị njikwa HR iji nweta ọrụ ọrụ na Dubai City. Ebumnuche iji nyere gị aka. Ọbụlagodi na onweghị onye maara gị n'ụzọ ị ga - esi wee soro ndị na - elekọta HR, Senior Recruiters, na CEOs na Dubai. Putzọ ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ n'ime ndị Dubai zụlitere agencieslọ ọrụ na-ewe ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ, nwere njiri mara maka oghere ọrụ na mpaghara gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ijikọ na HR Director nke Hays.ae ma enwere nnukwu ohere na ọ ga-ama onye nwere ike enyere gị aka nyocha ọrụ gị.
Ndị mba ụwa nwere ike itinye akwụkwọ maka ọrụ na Dubai
n'ihi na ọrụ gulf, enwere ike imekọrịta ihe na njikọta ọnụ na Linkedin. N'ezie, enwere ike ịnwe gị na ndị ọzọ na ntanetị. Mana maka nke a, ị nwere ike sonyere anyị ọkachamara ụlọ ọrụ mkpakọrịta sistemu ma ị nwere ike ijikọ karịa ndị na - ewe 2,000 na-agụ ọrụ na Dubai City. Dị ka ihe atụ dị n’elu ebumnuche anyị bụ ijikọ gị na ndị ọkachamara n’ọrụ ịnabata ọrụ. Na-ekwukarị na United Arab Emirates anyị na-enwe Eze anyị, Mgbe ahụ anyị na Qatar na Saudi Arabia na-arụ ọrụ ebe ị nwere ike ịnweta Mwepu ọrụ na Dubai 2019 n'ime ubi gị.
N'ikpeazụ, ọtụtụ ngwaọrụ n'ịntanetị na-adịkwa inyere gị aka nweta ọrụ kachasị elu na Dubai 2019 na UAE. Na mmechi, Portal na-elekọta mmadụ dịka LinkedIn na-enyere ndị njem aka mba ofesi itinye akwụkwọ maka ọrụ na Dubai. Site n'oge ruo n'oge ndị na - agụ akwụkwọ na - akpọ Linkedin na-enye gị ohere isoro ha na-emekọrịta ihe mana ọ bụ naanị na ụzọ ọkachamara dịka Emirates.
Maka oge kachasị, nwaa ijikọ ndị na - ewe ndị ọrụ wee debe maka ohere ọrụ. N'ọnọdụ nke abụọ a, denye aha anyị na usoro njikọta aka iru ọrụ n'ime Dubai maka ndị ala ọzọ na ohere omume dị n'ime Middle East. Iji chịkọta gị, ị nwekwara ike izute onye ọkachamara ọzọ ọkachamara n'ịbanye n'ọrụ site na netwọk ndị ọzọ na netwọk mmekọrịta dịka Dubai City Company Facebook or Twitter.
Jikọọ na ndị ndu / ndị ọrụ nchịkọta / onye ọrụ nchịkwa
Ahịa WhatsApp iji chọta ọrụ na Dubai
Isi ihe a na-elegharakarị anya bụ saịtị saịtị ọrụ. Iji gosipụta akụkụ dị mma na ụlọ ọrụ ndị a ị nwere ike ịchọta. Ọrụ ile ọbịa na Dubai, kpamkpam Ọrụ gọọmentị Dubai oghere na ikwu okwu n'ozuzu ya arụ ọrụ oge na Dubai ma ọ bụrụ na ị dabere na UAE. Otú ọ dị na n'akụkụ ọjọọ ma ọ bụrụ na ị si India na ịchọ ọrụ na Dubai maka India ọ bụ ike. Na agbanyeghi na ị gụsịrị akwụkwọ ugbu a ma ọ bụ na ịnweghị ahụmịhe ọrụ ma na-achọ ọrụ na Dubai maka freshers. N’oge niile, ikwu okwu n’ikpeazụ ịchọrọ ọrụ ịchụ Dubai ga-adaba. Dị ka egosiputara n'elu ụlọ ọrụ Dubai City jiri aka oru guzobe ọtutu oru na MBA. Ndị otu anyị echebarala ihe niile echiche na nyocha nke ikpeazụ ịmalite enyere ndị mba ọzọ aka.
Ọzọkwa, ọrụ kachasị mma na- ọrụ ego na Dubai dị ka Emirates NBD na HSBC Bank na UAE. Toghara ịkọ banyere ọrụ ndị ọka iwu yana ọrụ iwu na Dubai. Ma Rak Logistics ụlọ ọrụ ebe elu logistics ụlọ ọrụ ndị dị na Dubai na-enye ọrụ lọjistik na Dubai. Nyere ihe ndia, ndi n’acho oru nke uwa na UAE base expats na-eziga CV / malitegharia ndị ọrụ nchịkwa na UAE.
Jikọọ Ahịa Group maka ọrụ UAE
WhatsApp Onye ozi na-adịghị egbu oge enyere gị aka Ọrụ Dubai. N’ime oge, inwere ike ịgwa ndị ọrụ mmadụ okwu. Ma ọ bụ ọbụlagodi CV gị n'ime ole na ole ndị na-eme nchọpụta na Dubai Otu WhatsApp. Site n'oge ruo n'oge ndị ọrụ HR na ndị na-ewe ndị ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi na-edepụta ọrụ ntinye data na Dubai ka ị wee nwee ike ịwụ elu na ọrụ abụọ. Ruo ugbu a, anyị na-enwe gburugburu ndị otu mkpịsị ugodi nke 10 Whatsapp na Dubai. Yabụ ka anyị bụrụ ugbu a ruo ugbu a karịa ndị na-achọ ọrụ 50,000 achọburu ọrụ mba nile na Dubai 2019 naanị site na iji nke anyị Middle East Ahịa WhatsApp.
Companylọ ọrụ Dubai City na-enwe olileanya na ị ga-enwetakwa ọrụ nrọ na United Arab Emirates. Kpọọ gị ka i sonyere anyị Òtù WhatsApp nke Dubai. N'aka nke ọzọ, ọ bụ 100% n'efu na ịchọghị ime naanị ihe kwalite mmalite na chọta nke kacha mma expat ọrụ na Dubai. Ruo na otu pịa nwere ike ịgbanwe ọtụtụ ma ọrụ ị na-arụ Dubai na-aga.
Jikọọ na ndị ọrụ nchịkọta ndị ọrụ na WhatsApp Group
Ọdịnihu nke nchọta ọrụ bụ nke vidiyo
Ọrụ Job na Dubai, na njedebe, na-achọ ndị chọrọ ịtụnanya. Iji bido, akụkọ ụlọ ọrụ mba ụwa na-egosi na kemgbe 2015. Ruo ugbu a, 75% nke ịntanetị na-ahụ anya na vidiyo ahụ. N’ime ntabi anya, CV ga-abawanye rue 85% site na 2020 Expo na Dubai maka Vacancies gọọmentị. Nleghari uche n in ụlọ ọrụ bụ ihe na-aga n'ihu United Arab Emirates.
Nkebi nkata Youtube Resume nke nwere ike ịkekọrịta na-arụ ọrụ nke ọma na mgbasa mgbasa ozi dị mma. Iji malite, nyocha ozi nyocha youtube ịmaliteghachi vidiyo vidio na-ewerekarị ihe dịka 30 ruo 90 sekọnd ogologo. Isi ihe ọzọ ịchọrọ ịgbaso bụ gosipụtara onwe gị dịka onye nwere mmetụta maka a ezigbo onye ọrụ. Ikwesiri inwe ike igosi otu i nwere ike isi nyere ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị aka. Tụkwasị na nke a, nyere ha aka ịzụlite azụmahịa ma jiri okwu ndị ọzọ nwee ọganihu n'ọhịa ahịa.
Nkiri vidio maka ọrụ na-achọ UAE
Nothapụ ikwu na ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ amaghị ebe ha ga-amalite. Ọ bụrụ na ị na-achọ Ọrụ Dubai maka ndị America ị kwesịrị ịlele Jobma.com. Ihe dịkwa mkpa na nke ahụ bụ ịmalite ịchọta ndị isi ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị na ego oru na UAE. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na-arịọ ndị njikwa HR n'ime ụlọ ọrụ ahụ na ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọrụ na mpụga ọnụ na ha ga-enyere gị aka. N'ụdị ahụ, soro na Omenala nke ụlọ ọrụ ma weta onye were gị n'ọrụ ga-ewebata fim.
Site n'oge ruo n'oge, ọrụ ndị dị na mba ndị dị n'ugwu na-eme nnukwu ngwa ngwa. Karịsịa mgbe ndị ọkachamara na-adọrọ ọrụ na-eleta nchịkọta Youtube. Ọzọkwa ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ akpọ ndị na-aga ime ihe ma kwurịta ọnọdụ dịnụ. O kwekọrọ akwụkwọ njem-na nyocha na ha na mgbe obere oge gasịrị, onye ọrụ ọrụ ugbu a na-enye ya Ọrụ Dubai ohere. Dubai na-emeghe a na-enwe ekele dị ukwuu na ahụmịhe ọrụ ha na ndị were ha n'ọrụ.
Vidiyo vidio ka dịkwa obere nhọrọ ọhụrụ maka ịchụ nta ọrụ na Dubai City. Mana n'ikpeazụ, enwere ike ịgafe dị ka ụzọ ndị ọzọ maka ọrụ ịchọ mma. Kama ịkọwa usoro ndụ ogologo, nkọwa na-eji obere ihe nkiri Youtube. Na nchịkọta, nye echiche dị mma maka ọrụ ọrụ ị jisiri n'oge gara aga. Dika egosiputara nke di elu ma nwe ahoro nke ndi choro si n’ime obodo Ọrụ ahịa Dubai na-adọrọ mmasị karịa na nzukọ nke ụwa na United Arab Emirates.
Nyere isi ihe ndị a, na-eme ka ịmaliteghachi vidiyo Youtube dị mfe. O doro anya na ọ ga-enyere ha aka mee mkpebi dị mma ma nọgidesie ike n'ọkwá gị na Ngalaba Nchekwa. Fọdụ ndị na-ewe ndị ọrụ na-anakwereworị ihe ndị ewu ewu na fim ịmaliteghachi. Na nyocha ikpeazụ, ngwa mkparịta ụka a na-atụ aro na-enyekwa mkparịta ụka ajụjụ na azịza maka nke a ụzọ ị ga-esi nyochaa ajụjụ ọnụ. Iji chịkọta mkparịta ụka ihu na ihu, na ogologo oge, na-eme ka ndị na-enyocha ndị mmadụ tinye aka na obodo.
Nkọwa maka ọrụ ka mma na Dubai
N'ihi nke a, n'ezie ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ anwalela saịtị ọrụ kachasị mma na Dubai na ndị ọzọ arụ ọrụ ọrụ ntanetị. Ọzọkwa, iji mee ka ọ dị iche, akwụkwọ akụkọ enweghị azịza ọ bụla. Na ìhè nke ọkwọ ụgbọ njem na Dubai. Otú ọ dị, ndị nnọchiteanya nwere ike ịchọta gị ohere ọ bụla na Dubai. Mana n'eziokwu, ihe ka ukwuu n'ime ọrụ ahụ na-esite n'aka ndị ị maara na-enweghị isi. N'aka nke ọzọ, usoro ndokwa a nwere ike ịnweta gị maka agbamume agbamume. Site n'enyemaka ndị na-ezo aka maka a Ọrụ ụlọ ọrụ Dubai Ọnọdụ na-enye gị ezigbo ihu ọnụ na ntụkwasị obi. N'iburu nke a n'uche, ịnwere ike ịnwe ohere ọ bụla na Dubai na-enweghị de facto achọ ụlọ ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ na UAE.
N'inye ihe ndị a, ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ chọrọ inweta ọrụ na UAE. N'ikwu ya, onye obula ọ bụla ga-achọ ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị mma. Ebe ha nwere ike iji agụmakwụkwọ onwe ha na n'eziokwu jiri nkà na ahụmahụ tinyere nkà nkwurịta okwu mee ihe. Ihe dị mkpa iji chọpụta ndị nnọchiteanya ka bụ isi iyi kacha mma maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai. N'ọnọdụ ndị ahụ iji mee ihe maka ọrụ maka ọrụ ka mma na Dubai ị ka nwere ezigbo ahụmịhe. N’ezie, ị nwere ike ịbụ ezigbo nwa akwukwo. Mana ịmalite ọrụ ịchọrọ inwe gburugburu na-akwado ma ọ bụ ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi nwere ezigbo ọnọdụ nwere ọnọdụ siri ike.
Ọ dị mkpa ịghọta na ọtụtụ n'ime ndị were ọrụ na-enye ndị ọrụ ha ume. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ha na-ezo aka na onye ịga nke ọma na ha na ụlọ ọrụ ha. N'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ha ga-akwụ gị ụgwọ bụ ọnọdụ mmeri maka onye ọrụ na onye na-achọ ọrụ. N'ikpeazụ, ị nweta ọrụ ntinye aka na Dubai n'ime akpaaka ahịa na Emirates. Njikọ gị na-enweta ụgwọ ọrụ nke onye na-ahụ maka ịrụ ọrụ influencer ma ọ bụ ọbụna onye na-arụ ọrụ elu.
Job na 2019 Boards na Career Websites
Ogwe ọrụ dịgidere n'ọdịnala chọọ ọrụ mpaghara na Dubai. Ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ ruo ọrụ mgbasa ozi ugbu a na Dubai. O doro anya na ugbu a ịkwalite ọrụ ọrụ ọhụrụ ma na-arụ ahịa maka ịkwagharị ọrụ ohere ọrụ. N'otu oge, ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ nwere ike ka na-adị n'echiche nkịtị. Mana n'oge ugbu a, 98% nke ebe nrụọrụ weebụ na ụlọ ọrụ ọrụ nweta aka na usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọfụma. N’agbata bọọdụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ na UAE ọrụ maka Expo 2020, Dubai ekesala ndi ha ego. N'azụ dị n’obodo ahụ, ọ bụghị naanị otu obodo n’Amirika, chọọ ọrụ na ndu ke Dubai.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ gọọmenti na-arụ ọrụ mgbe nile na-enye ọkwa ọrụ nhọrọ ọrụ na UAE. Dịka eziokwu, ndị na-akwụ ụgwọ ga-enweta ohere iji nweta ọrụ site n'ebe ahụ. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji ohere nke engines na-achọ ọrụ. N'otu oge ahụ na ịntanetị, ị nwere ike ịhụ ohere ọ bụla na Dubai. N'elu ihe netwọk niile n'ịntanetị, anyị nwekwara oke ọnụ ọgụgụ nke ọrụ-metụtara akwụkwọ ndekọ weebụ zuru ụwa ọnụ nke na-edepụta ọrụ. Ọmụmaatụ, Ọfịs Dubai maka ọkwa ụgbọelu na Dubai ma ọ bụ Fiverr.com ebe ị nwere ike nweta freelance graphic mmebe ọrụ na Dubai.
Dubai Best Job Portals na UAE - na-achọpụta ihe ndị ọzọ
Kasị mma Ụlọ ọrụ Job na Middle East
Chọta ọrụ na United Arab Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na anyị na-ewere ọnọdụ n'etiti ụlọ ọrụ kachasị n'ịntanetị. Maka nke a, anyị na-enye enyemaka na ụlọ ọrụ Emirates kasị mma dịka Monster.com, n'eziokwu, Bayt.com ma ọ bụ CareerBuilder.com na-arụ ọrụ na anyị. Ihe ọzọ dị mkpa na ebe nrụọrụ weebụ anyị na-arụ ọrụ dị nnọọ ka anyị onwe anyị. Ha na-enyekwa aka na-enyefe ndị ọzọ nweta ọrụ na UAE. Iji dokwuo anya ọrụ nyocha ọrụ anyị nke anyị nyere na UAE bụ otu n'ime ọrụ kacha mma na Dubai. N'oge na-adịghị anya, ị ga-achọpụta na ị ga-eji ụzọ ochie mee nchọpụta ọrụ ọdịnala ga-ada.
Otú ọ dị, ọ bụrụhaala na ị na-eji ọrụ ịchọta ọrụ ị nwekwara ike nweta ọrụ na Saudi Arabia. Ma n'aka nke ọzọ ọrụ na Qatar bụ mfe ịchọta. N’ezie, ndị otu na-ewe ndị ọrụ na komputa ọrụ na Qatar nwere ntụgharị ọsọ ọsọ ọsọ n’oge n’itinye ndị na-achọ ntuli aka na Middle East. Na-ekwu maka ị na-achọ ọrụ na Middle East kama naanị UAE. Ruo ugbu a ị na-achọ ọrụ dum na Middle East na 2019 na 2020. Na-eme ka ị chọọ nnukwu ndị na-ege ntị na bọọdụ mkpanye na ndị ọrụ were aka n'elu nnukwu anya.
Chọpụta ndị ga-anata ọrụ na Dubai
International Trade Fairs na Dubai
Ndị na-ahụ maka ndị ọrụ mba ụwa na-atụkarị aro maka ọrụ dị iche iche. Ma ọ bụghị ikwu Ulo oru ahia mba Dubai ha dị nnọọ iche site na Dubai ahịa mpaghara. Otu n'ime ihe kachasị mma bụ Careers UAE ebe ndị ọkachamara mba ụwa na-achụso ọhụụ ọhụrụ. Ndị ọrụ a na-arụ ọrụ mgbe niile tinyere ụfọdụ ndị ọrụ ma ọ bụ Ndị ọrụ nchịkọta ụwa.
Oge ọrụ a na - enyere ndị amaala si UAE aka. Iji malite ọrụ ọhụụ na Lọndọn, chọọ ọrụ ọzọ na Australia, ekwesighi ịkọ otu n'ime ndị inyom kachasị ebe obibi ebe obibi Ọrụ New Zealand. Ndị na-achụpụ oge ụfọdụ ga-enwe ike ịchọta ọrụ na Canada. Ya mere, site n'oge ruo n'oge, ndị nlekọta nwere ahụmahụ na-achọkwa Ọrụ mba Dubai. O doro anya na ọ bụghị maka ụgwọ mana maka ahụmịhe mba ụwa. Maka nke a, Gọọmentị mepụtara ọkwa azụmahịa pụrụ iche.
Na ọrụ ọ bụla, ndị na-eme ahia ga-aga n'ihu na ndepụta nke njikwa na ụlọ ọrụ ga-adị maka ndị na-ahụ maka azụmahịa n'ụwa na Dubai. Nyere isi ihe ndị a, ị na-achọ ahịa ọrụ ohere Dubai should kwesịrị ị nyocha ụlọ ọrụ ọ bụla nwere mmasị na ha ọrụ na Sharjah. Dịka ekwurula, ịkwesịrị iwepụta ọnụ ọgụgụ usoro ọmụmụ yana yana ahụmịhe ọrụ. Akụkọ ndụ na nsonaazụ a dị njikere ịre onwe gị ụlọ ọrụ Dubai. Atụmatụ anyị maka gị bụ Ọrụ IT na Dubai maka onye mba ọzọs - n'ihi na ụdị ọrụ a maka ịmalite ọrụ ọ dị mfe ịnweta.
Ndị ahịa Job na Dubai nwere ike ịme ihe ị ga-eme
Mgbe ị gara ebe ahụ nwaa ka elebara ihe niile anya maka inweta oru na UAE. Ọ bụrụhaala na ị na - amalite mkparịta ụka gị na ndị na - ewe ndị ọrụ, ị kwesịrị ịtụle nke ahụ dịka usoro ajụjụ ọnụ. Okwu obula di nfe nwere ike buru na o mere ajuju. Onye ọ bụla onye na-ahụ maka ndị ọrụ nchịkwa maka South Africa ọrụ na Dubai ịbịaru nso n'ụbọchị ahụ nwere ike ịtọ gị ka ọ bụrụ ihe nhụba na ọrụ gị. Na oge oge ndị ọzọ nwere ike ị gaghị enwe ohere ịkụ gị ihe karịsịa maka ọrụ na Dubai 2019 na Abu Dhabi.
Isi ihe ọzọ dị mkpa bụ na otu ụlọ ọrụ dị iche iche nke mba. Ọ pụrụ ọbụna ijuanya nyochaa ọrụ maka gị. Ma ọ bụ na nke a, jụọ gị ajụjụ ọnụ na saịtị dịka onye na-eme nyocha na-emetụta nkọwa ha. Dịka eziokwu, anyị maara ndị na-achụ nta ego ole na ole na-enwetakwa ọrụ n'omume Oman ma na-ahụ ndị ọzọ ọrụ na Singapore na 2016 International arụ ọrụ na Dubai.
Debanye aha maka ọrụ UAE Job Job na Dubai
Ndị ụlọ ọrụ dị na Dubai maka ọrụ na Dubai
Ọnụ na ụlọ ọrụ Dubai City, ị nwere ike iji uche gị nye onye ọrụ kachasị ọrụ na Dubai ọrụ. Ejiri ya ụlọ ọrụ kasị mma na Dubai iji nweta ọrụ dị ka Filipino n'otu aka ahụkwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Companylọ ọrụ anyị mepụtara ndepụta nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na United Arab Emirates. Iji kọwaa ihe kpatara na ị gaghị aga ozugbo. Ọzọkwa na-achọ maka ohere ọrụ Dubai ọrụ ọrụ site na ha website ?. Maka nke a, ọ bụrụ na isi gị na-emeghe maka oghere na ngalaba ọrụ ha. Enwere nhọrọ ị na-atụghị anya ya chọta ọrụ na Dubai. Site n'otu akaebe, enwere ohere buru ibu na ị nọ na njikere maka. Ònye maara na ị nwere ike ịnweta ọrụ Saudi ma dị ka a ga-esi kwuo ya maka ịwu ya ọrụ na Dubai 2019.
Iji chịkọta anyị kpamkpam ụlọ ọrụ na Dubai maka ndị ọpụpụ. Emepụtara ndepụta nke ndị were n'ọrụ na UAE. Ka ị wee nwee ike ịmalite ịrụ ọrụ na ha. Na iji ihe omumu aka gi kpuchie onodu ohuru na UAE. Enwere ụlọ ọrụ ole na ole maka ọrụ ya na mba Gulf, ọrụ injinia na Dubai 2019, ị ga-ahụrịrị ihe bara uru maka onwe gị.
Ụzọ ahia kachasị mma maka ịchọta ọrụ
Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na enwere ike ịme ka ị rụọ ọrụ maka otu ụlọ ọrụ siri ike dịka ihe atụ maka mfe na-ezi ọrụ na UAE. Wee n’egbughị oge were ọdịnihu ma chọta ohere ọrụ ga - abara gị uru na ndụ gị. Mana n’otu oge, onweghi oge ndu di nkpa ma ichoro ima esi enweta ọrụ na Dubai na nleta nleta ọsọ ọsọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ. Na oge ị ga-etinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ niile dị na listi anyị. Na mberede, mana nke a nwere ike ịbụ ihe dabara adaba na ezughi oke maka usoro kachasị mma n'ime ịchọta ọrụ. Mgbe oge ruru eru maka ịchọta ọnọdụ ọhụrụ gị n'ime top gosiri ụlọ ọrụ na Dubai.
Send Ngwa - Ụlọ ọrụ kacha elu iji rụọ ọrụ na Dubai
Ịkpọ oku maka ọrụ na Middle East
N'ikpeazụ, anyị na-enweta iru ugbo iji chee maka ịbanye na Dubai. Ya mere, site n'oge ruo n'oge, anyị na-eche na ị yiri nwere mmasị na ndepụta ọrụ. Otú ọ dị, ohere a abụghị ókè. Mana n'otu oge ahụ, a na-eziga ọrụ a site na ụlọ ọrụ ozugbo na Dubai. Ọzọkwa, ị na-enwe mmasị na ụgwọ ụgwọ ụgwọ. Ị ga-achọ ịgbasa ibu a ndụmọdụ dị mma gbasara ọrụ. Dịka eziokwu, ịkwesịrị ịmalite dị iche iche site na ụlọ ọrụ Dubai dị n'ịntanetị. Dị ka ihe atụ, gbalịa iji nlezianya kpọọ oku oyi. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịmata njikọ a dịka netwọk njikọ tinyere ọrụ na Middle East nhọrọ ziri ezi.
Maka nzube nke ịchọta onye ọrụ a Ọrụ na Dubai na WhatsApp na 2019 -2020. Na n'ozuzu, ị ga-amalite ịmalite iji nkà na ụzụ telifon iji jide n'aka na ị bara uru. Ma, ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na-azụghị akwụkwọ na UAE. Ịkwesighi naanị ozi email iji kpọtụrụ onye ọ bụla n'ime nzukọ ebe ị zipu CV. Ma n'aka nke ọzọ, ịchọta nkọwa kọntaktị kwesịrị ekwesị gaa ụlọ ọrụ agadi ụlọ ọrụ mgbe ụfọdụ na-akụkọ. I ghapu igha maka google website: oghere Dubai maka oru ma obu ihuputa ihe ichoro ikwu okwu ya na ndi n’abata nnabata ibanye na aka elu. mmetụta onwe onye.
Ọrụ na Dubai 2019 - Ntak eji ụlọ ọrụ na-emepụta ihe?
Dị ezigbo mkpa ịghọta na mmetụta nkwukọrịta bụ isi ihe maka ịkpọtụrụ ndị mmadụ n'otu n'otu. Ekwesiri icheta na ndị isi ego ụzọ ekwuputara na mbụ nwere ike ịnwe ohere dị ebube maka gị. Nyere isi okwu ndị a, nwee obi ike ma jikọta ọ bụla Akwukwo ihe omuma gi na autobiography. Ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ chọrọ ma ọ bụrụ na ha debe ozi ịntanetị ị na-eziga.
Ị nwekwara ike ịjụ maka ozi gbasara ụdị nke na-agagharị na Dubai 2019, ma ọ bụ ụdị ụdị ọrụ ma ọ bụ àgwà ndị nzukọ na-achọ n'aka onye nyocha. Buru n'uche na a gaghị anabata ụdị ịkpọtụrụ a mgbe nile, ma enwere ohere ọ bụla ọ ga-enye gị ntinye aka na oge ohere ndị na-abịanụ.
Ndị isi ụlọ na ndị ọrụ nchịkwa na Dubai
Na mbido, ịkwesịrị ịtụle ụfọdụ enyemaka ndị ọkachamara na nchọta ọrụ gị. Site na ebumnuche a, ndị na-achụ nta n ’ụlọ ọrụ na ndị na-ewe ndị ọrụ nwere ike inye gị aka. Isi na-elegharakarị anya ihe ndozi maka ọrụ maka Middle East. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ ụfọdụ ụlọ ọrụ nchịkọta onwe ha nwere ike ibute ụgwọ ego. Ma na ndị na-eme nchọpụta dị mma na-emepụta profaịlụ ma na-atụle uru nke ọ bụla onye na-achọ ọrụ na Dubai. Maka nke a, enwere ọtụtụ ndị isi nnochite anya na ụlọ ọrụ nzuzo dị iche iche ebe ị nwere ike bulite usoro gị.
Iji mee nke ahụ, ịkwesịrị ịkọwapụta ahụmịhe ọrụ gị na uru dị ugbu a maka ịbanye n'ọrụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a ga-akwụ ụgwọ site na ụlọ ọrụ nchịkwa ga-adị njikere maka ogologo oge. Ikwu okwu n'ozuzu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dubai na-enyere ndị ala ọzọ aka n'ọrụ. Na mbụ, ịmepụta akụkọ profaịlụ wee gbaa ndị na-eme egwuregwu ajụjụ ọnụ. Na ogologo oge, ndị na-etinye ego. Ọ ga - ewe oge maka ihe ga - enyere ha aka ịmekọrịta azụmahịa na ụlọ ọrụ na - akwụ ụgwọ. Ndị isi na UAE gafere ndi mmadu n’achu oru site na igbalita iji chọta agwa pụrụiche.
Ọrụ ọrụ enyemaka nke Dubai
Nye ihe ndị a ụlọ ọrụ na-ahụ maka Dubai na Abu Dhabi agbalị iji mejue ohere nke onye nlekota oru nke aka ya nyere n'etiti otu ụlọ ọrụ. Agbanyeghị ịchọta ọnọdụ maka onye na-achọ ọrụ ọ bụghị ihe dị mfe ịme. N’agbanyeghi na mmadu ewerela onye na-ewe mmadu ego maka oru ha. Ọ dị mkpa ịghọta na a na-akwụkarị ụgwọ mgbe enyere ọrụ. Yabụ iji gosi dinta isi nkwa bụ itinye gị ASAP.
N'akụkụ dị mma na-eburu n'uche na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, na mahadum dị na UAE. N'ezie, ọtụtụ n'ime ha nwere ọrụ ọrụ na ọrụ enyemaka. Na otu ihe, ha na enyere aka ndi umu akwukwo ohuru aka iweputa akwukwo ha. N'akụkụ na-adịghị mma ego, ndị ọkachamara enyere otu na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ na ụmụ akwụkwọ postgraduate aka ịchọ ọrụ ha na United Arab Emirates. Nweta nrọ ahụ ọrụ na Ụlọ ọrụ Dubai 2019.
Debanye aha na ụlọ ọrụ nchịkwa na UAE
Ọrụ nwa oge ma ọ bụ Ụlọ akwụkwọ
Site n'oge ruo n'oge ọrụ ọrụ nwa oge nwere ike ịbụ ezigbo ntụziaka maka ọnọdụ na-adịgide adịgide. Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ịhapụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nwa oge na ụlọ ọrụ ọ bụla a ma ama bụ ezigbo ụzọ iji nweta ọrụ mmalite maka Pakistani. Dubai City Companylọ ọrụ na-enye gị kọntaktị ahịa bara uru iji kpọọ ihe ga-eme n'ọdịnihu. Agencieslọ ọrụ na-edebanye aha na-enweghị ike inye aka na ịchọta ebe enyere ma ọ bụ ọnọdụ enweghị ọrụ nkwekọrịta na United Arab Emirates.
Internships bụ ihe dị ukwuu nhọrọ maka ụmụ akwụkwọ Undergraduate na UAE. Nke bụ eziokwu, onye ajụjụ maka ị gụsịrị akwụkwọ na kọleji, ọ bara uru were nkuzi? Dika odi, odi nkpa mee ka omuma ohuru ọ bụla na Middle East n'ọnọdụ ọ bụla. Ulo akwukwo ulo akwukwo na ebe ndoro-ndozi dika dika nwa oge ọrụ na ibi na Dubai ụlọ ọrụ nwere ike ijikọta onye ọganihu na ohere.
N’aka nke ozo, ikwesiri iwee uzo n’iru ma nke ahu gabu kwa uzo di uku icho oru na Dubai City. N'otu oge ahụ, ịnwere ike ịmalite ịrụ ọrụ n'oge ọ bụla naanị maka inweta njikọ ụlọ ọrụ dị oke ọnụ. N’aka nke ozo maka inweta ndumodu, igbalia inyocha fchee nrọ gị ọrụ na Dubai 2019.
Ọrụ na Dubai 2019 ma gbalịa n'ụzọ pụrụ iche
Iji mee ya dị iche iche ugbu a ahịa ahịa bụ ebe asọmpi maka onye ọ bụla na-achọ ọrụ. Ufodu ndi choro oru achoghariri ihe bara uru maka uzo ndi ozo iji megharia uche ndị ọrụ na Dubai maka ndị India. Isi ihe ọzọ bụ mgbasa ozi na mbadamba ọrụ. N'ihi ya, akwụkwọ mpịakọta na akwụkwọ nke usoro ọmụmụ gị na biography kwesịrị ịbịakwute ya.
Gbanwee nkesa, n'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ghọrọ ihe dị ezigbo mkpa. Maka nke a, ụfọdụ ndị mmadụ na Lọndị mepụtara ọtụtụ usoro mmalite nke aka ya. Kpughari onwe gi nye ndi mmadu na ijeghari obodo London dika akwukwo ndi mmadu. Dịka e gosipụtara n’elu, ụfọdụ bụ ụfọdụ usoro ndị mmadụ n’agha sirila mefee ka e wee cheta ha ndị nwere ike iji ọrụ na Dubai.
Ọzọkwa, otu ụzọ ndị a nwere ike n'ezie enyere gi aka ibido ulo gi na United Arab Emirates. N'otu aka ahụ, lezie anya mgbe ị na-achọ ọrụ mba ofesi. Inwere ike iji uche gị mee ihe ọrụ ego na-enye na Qatar ma ọ bụ Saudi Arabia. Ma, n'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ijide ozi ọjọọ ahụ.
N’agbanyeghi na ndi na acho oru na-arụ ọrụ iji usoro ihe eji emepụta ihe n'ụzọ ọ bụla dịnụ. Sitekwa n'otu aka ahụ, ị ​​ga-anwa ịpụ iche na ndị nọ ebe a na-achọ ọrụ Dubai na ndị ọzọ na-achọ akwụkwọ. Buru nke a n'uche jide n'aka na ị ga - edebe ozi kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ. N'ihi na ị nwere ike ịnọ n’oche mgbe niile na ị ga-enweta ọcụ Ohere Ọhụụ Ọhụrụ. Na ịghara ịkọwa na ị na-anwa chọta ntuziaka ọrụ dị mma na blog anyị.
Ejila mmadụ ole na ole elekọta Ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta ohere ị ga-enwe na Dubai.
Ihe dị n'okpuru ala maka ọrụ na Dubai 2019
Dakọtara maka Ọrụ na Dubai 2019 na 2020. Bụrụnụ ndị na-azụ ahịa ọrụ Middle East ugbu a Buru ibu di elu na oru aka zuru ezu. N’aka nke ozo, odighi nkwa ma obu nkwa maka ịchọta ohere kachasị mma. Nzere na asambodo ọrụ na-adabere na ngwakọta nke ụzọ nyocha ọrụ. N'agbanyeghị ihe na-eme ná ndụ gị gbalịa a nyocha oru na UAE n'ụzọ pụrụ iche n'oge ọ bụla. Nọgide na-atụgharị uche na ụzọ ndị dị irè bụ ụzọ dị iche iche. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ebe ọrụ dị na Dubai maka ịchọta ihe omuma banyere Dubai.
N'ikwu eziokwu, n'akụkụ oke kachasị elu gosiri ụzọ ọrụ na UAE, e nwekwara mmadụ ole na ole. Ha niile nwere ike na adịghị ike ha n'agbanyeghị na onye kasị mma nwere ike ọ gaghị enyere gị aka. Ma ịkọwa n'akụkụ dị mma atụla ụjọ ịnwale ya usoro dịgasị iche iche maka ịchọ ọrụ ọhụrụ na Dubai.
Na-ekwukarị, thentanetị bụ isi ihe maka Ọrụ Google & Ọrụ na Microsoft. Na njedebe ikpeazụ, ghọọ ihe kacha mma maka ndị na-achụ nta achụmnta ego na Dubai City.